Umangele umndeni ujuqwa yisisu | Isolezwe
Umangele umndeni ujuqwa yisisu
Isolezwe / 3 January 2013, 10:56am / BONISWA MOHALE
UMNUZ Mandlenkosi Hadebe waseNazaretha ngasePinetown uthi usadidekile namanje ukuthi ingane yakhe ibulawe yini ngempela njengoba nabo besajuqwa yizizu namanje. Izolo bebesesesibhedlela nezingane zabo ezimbili nomkakhe
KUSHONE ingane (9) kwalaliswa abane esibhedlela emuva kokuthi bedle isitambu bakhishwa yizisu ngeSonto.
Kulesi sigameko kushone u-Anele Hadebe kwalaliswa esibhedlela unina uNkk Gugu Bhengu (38), uMnuz Mandlenkosi Hadebe (58), Amahle Zungu (5) no-Andile Mkhize (12) baseNazaretha eduze kwasePinetown.
Ngokusho kukaNkk Bhengu umndeni uqalwe wajuqwa yizisu ngoMgqibelo kodwa bazitshela ukuthi bashiswe yilanga ngoba babebuya enkonzweni.
“Sabuya eSabatheni siphethwe yizisu nobaba sathola nezingane zikhala ngaso isisu. Mina ngalala ngingadlile ngeSabatha ngize ngadla ngeSonto sengidla isitambu esingathoseliwe ebengisigxabhisile, izingane zadla u-curry wethini likabhontshini onamazambane nophuthu,” kusho uNkk Bhengu.
Uthe isitambu usithosele ngoMsombuluko kanti basidle nenkukhu ethosiwe.
Uthe yilapho izingane ziqale ukugula khona kakhulu no-Anele sathi uma simthola ekamelweni samfica esezimoshile, kungathi nekhanda alithathi kahle. Sibe sesicela usizo komakhelwane basiphuthumisa esibhedlela kodwa u-Anele satshelwa ukuthi ushonile uma esexilongwe ngodokotela. Angazi ukuthi empeleni ngizothi siguliswe yini ngoba ngesikhathi izingane nobaba bekhala ngesisu ngibaphuzile utshwala besiZulu obunoviniga,” kusho uNkk Bhengu.
Amazwi akhe ananelwe ngumyeni wakhe uMnuz Hadebe othe usadidekile ngokwenzekile ngoba ngeke bazi ukuthi bekuyisisu sokudla okuphekwe ekhaya noma yilanga.
Uthe sebelinde ukuthi ingane ihlolwe wodokotela ukuze bazi ukuthi yini ngempela umsusa walesi sisu esijuqe umndeni.
UHadebe nomkakhe bakhale ngokuthi abanawo amandla okufihla ingane yabo njengoba ephila ngokubamba amatoho kanti unkosikazi wakhe akasebenzi.
UNkk wakhe uveze ukuthi banomasingcwabisane ozokhipha ibhokisi kuphela kodwa abazi okunye kuzovelaphi, ucele noma ngubani ongasiza ukuba ababheke.
Umphakathi waseNazaretha uzwakalise ukushaqeka ngalesi sigameko usho nokuthi unokudideka ngomsusa wesisu esidlule nomphefumulo wengane yakwaHadebe.